हत्या « Janata Samachar
विप्लवलाई मूलधारमा आउन प्रधानमन्त्रीको यस्तो अल्टिमेटम !
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको माओवादीलाई मूलधारको राजनीतिमा आउन साढे दुई हप्ताको अल्टिमेटम दिनुभएको छ । संसदीय दलको बैठकमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अराजक गतिविधि
होलीमा छुरा प्रहार गरी हत्या गर्ने चार पक्राउ
इनरुवा । होली पर्वका दिन सुनसरीको धरान उपमहानरपालिका–९ बगैँचा लाइनमा निमास तामाङको हत्यामा संलग्न रहेको आरोपमा प्रहरीले चार जनालाई पक्राउ गरेर सार्वजनिक गरेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुनसरीले तामाङको
भण्डारीको हत्यामा संलग्न दुई पक्राउ
धनगढी । कैलालीको गोदावरी नगरपालिका–४ मा एक हप्ताअघि हर्कबहादुर भण्डारीको हत्यामा संलग्न भएको अभियोगमा दुई जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । बैतडीको दशरथचन्द नगरपालिकाका ४५ वर्षीय भण्डारीको हत्या घटनामा संलग्न
इँट्टा प्रहार गरी वृद्धको हत्या
सनिउल्ला धोबी कपिलवस्तु । शिवराज नगरपालिका ६ पिपरीमा एक वृद्धको इँट्टा प्रहार गरी हत्या भएको छ । पिपरी बस्ने ७० वर्षका त्रिवेणी यादवको हत्या भएको हो । मंगलबारराति ३ बजे
तीन पत्रकारको हत्या
मेक्सिको । मेक्सिकोमा फेरि एकजना पत्रकारको हत्या भएको समाचार छ । शनिबार ती पत्रकारलाई आफ्नै घरमा गोली हानी हत्या गरिएको अधिकारीले जनाएका छन् । यस वर्ष अर्थात गएको तीन महिनामा
श्रीमतीलाई कतार बोलाएर ‘भ्यालेन्टाइन्स डे’ कै दिन हत्या !
काठमाडौं । गोरखाकी २५ वर्षीय अञ्जु पाण्डे तिवारीको कतारमा रहस्यमय मृत्यु भएको छ । पाँचवर्ष अघि तनँहुका किशोरबाबु पाण्डेसँग विवाह गरेकी अञ्जुको मृत्यु रहस्यीमय तरिकाले भएको बताइएको छ । किशोरबाबु
गोली हानेर यादवको हत्या, बासिन्दा त्रसित
सर्लाही । सदरमुकाम मलङ्गवामा गए राति अज्ञात समूहले गोली हानी एक युवकको हत्या गरेको छ । गोली लागेर मलङ्गवा नगरपालिका–८ का ३१ वर्षीय मनोज यादवको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय
आफ्नै सहकर्मीको कुटीकुटी हत्या
रुकुम । पुथा उत्तरगङ्गा गाउँपालिका–१० बाछीगाउँमा कुटपिटबाट एकको मृत्यु भएको छ । बाँके नेपालगञ्जका ४६ वर्षीय दीपक भनिने टक्क रावतको कुटपिटबाट मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुकुम (पूर्व)ले जानकारी दिएको
१ करोड फिरौती दिन नसक्दा जुम्ल्याहा छोराछोरीको हत्या
काठमाडौं । भारतको मध्यप्रदेशस्थित सतना जिल्लामा जुम्ल्याहा छोराछोरीको अपहरणपछि हत्या भएको छ । दुई बालबालिकाको हत्यापछि त्यहाँको अवस्था अहिले एकदमै तनावपूर्ण बनेको छ । आइतबार यहि विषयलाई लिएर दिनभर सतना
काठमाडौं । भारत मध्य प्रदेशको मुरैना जिल्लाका एक व्यक्तिले आफ्नै श्रीमतीको हत्या गरी उनको टाउको बोकेर प्रहरी चौकीमा पुगेका छन् । यो घटना बुधबारको हो । श्रीमतीको टाउको काटेर प्रहरी